လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောအခြေအနေ – Flegt Myanmar
FLEGT ဘာကြောင့် အရေးကြီးသလဲ။
Register with FLEGT
Home » လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောအခြေအနေ
၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် သစ်တောညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်က ဦးဆောင်၍ မြန်မာ့သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုကို ကောင်းကင်မြေတိုင်းဓာတ်ပုံများထုတ်ယူ၍ သိပ္ပံနည်းကျ စနစ်တကျ တိုင်းယူခဲ့ရာတွင် မြန်မာ့သစ်တော ဖုံးလွှမ်းမှုပမာဏသည် နိုင်ငံဧရိယာ၏ ၅၇% အထိရှိခဲ့သည်။ (သစ်တောဦးစီးဌာန) အဆိုပါ ၅ရ% သည်လည်းတောကောင်း (closed forest) များသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့သစ်တောဧရိယာသည် နိုင်ငံဧရိယာ၏ ၄၃%ရှိသေးသော်လည်း တောပျက် တောညံ့ (open forest) ဧရိယာ ၂၁% နှင့် တောကောင်း (closed forest ) ဧရိယာ ၂၂% ရှိကြောင်း သစ်တော ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၇) ၇က်နေ့က အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ဒါဘင်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော ကမ္ဘာ့သစ်တောများ ကွန်ဂရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့သစ်တော အပြုန်းတီးဆုံး တတိယ မြောက်နိုင်ငံ အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်ကို ခံခဲ့ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ် ပါတီ အာဏာရစဉ်ကာလက သစ်တောကဏ္ဍမှ နိုင်ငံခြား ငွေ စုစုပေါင်း၏ ၃၀% အထိ အဓိကရှာဖွေနိုင်ခဲ့သေည်လည်း သစ်တောပြုန်းတီးခဲ့မှု ပမာဏသည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိကာလအတွင်း သစ်တောပြုန်းတီးမှု ပမာဏကို မမီခဲ့ပါ။
No. 53-54, Kyaing Tone st, Ottara Thiri Township, Nay Pyi Taw +959963541351 secretariat@flegtmyanmar.com
Copyright © 2017 Flegt Myanmar. All right reserved.